Aries Nyeredzi Chiratidzo: Aries Sign Maitiro, Hunhu, Hunhu - Zodiac Zviratidzo
Aries Chiratidzo: Hunhu, Hunhu & Hunhu
Hunhu, Hunhu & Hunhu
Enda, enda enda!
MaAries ndiwo mabhureki echirevo eiyo Zodiac . Kushingairira kwavo kukuru uye simba risingaperi zvinoita kuti munhu wese akavapoteredza anzwe akaneta achingotarisa zviitiko zvese. Izvo zvinokwanisa kuitwa neSain Sign nekutarisisa zvinoorora, asi hunhu hwavo hunodzikunura chaizvo kushinga kwavo.
Aries Sign Tafura yezviri Mukati
Hunhu, Hunhu, & Hunhu
Chiratidzo cheAries uye Zvazvinoreva
Chokwadi & Metaphysical Sangano
Kugarisana - Murudo & Mubhedha
Aries Vana (Musikana & Mukomana)
Basa, Zvipfuwo & Nguva
Zvipo Zvakanakisa zveAries
Dzokera kune ese eWestern Zodiac Signs
Dzokera kune ese Zodiac Zviratidzo
Aries Hunhu, Hunhu, & Hunhu
Iwo maAries anofamba achipinda munzvimbo dzisina mumwe munhu anotsunga kuenda, kupfeka yavo yakajeka persona uye 'gondohwe' chaimo kuburikidza nedambudziko.
MaAries haatambudzi kunzvenga - ingo svika padanho uye kuenderera mberi nezvinhu.
Vamwe vanhu vari mudenderedzwa remhuka iyi yeZodiac vanoona maAries seanokurumidza, uye maAries anogona kuita zvakanaka kuti afunge nezvemaonero avo. Zvinogona kuti dzimwe nguva kumira uye kuronga zvishoma kunogona kukuchengetedza kubva kunharo dzisingafadzi.
Paunenge uine maAries muhupenyu hwako iwe uri kubata nenyika inotonga yeMars, aive Mwari wehondo. Saka gondohwe rako harikwanise kugara rakanyarara mukutarisana nekukonana kana zvipingaidzo.
Iyo Ramu haigare ichiita 'hondo', asi havazi ivo vanopa maruva-simba runyararo T-shirts futi. Iyo yakakosha yehupenyu chidzidzo chevazhinji maAries ndeyekuti ungatore sei iro sumbu remasimba uye uwane nzira dzekurishandisa zvine hungwaru uye zvakajeka, pasina kumomoterwa nekuita kungoitika.
Elementally maAries anouya pasi pehutongi hwe Moto . Izvi zvinowedzerawo kune matsimba emagetsi eRam, asi zvakare inogadzira nharaunda isingafungidzike zvakanyanya. MaAries anogona kudziya uye kupenya kana dutu remoto rine hasha.
Nekutenda avo vanotevera maAries mukukonana vanoona zvakare kuti ivo vanoziva kurarama, uye havana kuzeza kukweretesa iwo hunyanzvi kuzviitiko zvakaoma chero vateveri vateerere kutungamira kwaRam.
Aries Hunhu hwepanyama & Hunhu
Iyo maAries 'akachekwa' ane yakajeka geometry ine chiseled chin uye yakanyatsotsanangurwa muromo. Nekuda kwechiyero chezviitiko zvavo, miviri yavo inowanzo kudzwa, zvemitambo uye zvine mutsindo.
Utano huchenjeri ichi Chiratidzo cheZuva hachina dambudziko nekuchengeta. Chikamu chega chemuviri wavo chinofanirwa kuchengetedzwa nemazvo musoro wavo. Kana maAries akaronga kuve nechekuita mumitambo kusvetuka inodzivirira musoro giya haisi sarudzo.
Ziva kuti avo vanozvarwa pasi peichi Chiratidzo cheAstrological vane unreal metabolism (ehe, isu tese tine godo) asi izvo zvinoreva kuti vanonyatsoda kudya chikafu chinovarambisa vasina kupa chikafu.
Iyo nyaya yeAries inosungirirwa neyechiGiriki nhema pamusoro peGoridhe Fleece. Iyo nyaya inoenda kuti Poseidon aive baba veRamu, iyo yakapihwa sechipo kuna Mambo Aeetes. Mambo akaisa dehwe regoridhe pasi pekudzivirirwa neshato. Kusvikira Jason (waJason uye mukurumbira weArgonauts) atora dehwe akatadza kutora nzvimbo yake chaiko paChigaro cheTesaly. Jason akabudirira nerubatsiro rweMedea ndokuisa dehwe mutemberi yaZeus.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveAries ndechekuti Zuva rakayambuka equator richifamba kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba paVernal Equinox Izvi zvinoratidza zuva rekutanga rematsutso, iro rakawedzera kubatana kwesangano renyeredzi nemoto.
Aries Chokwadi & Metaphysical Sangano
Mazuva: Kurume 21 - Kubvumbi 19
Chiratidzo: Iyo Ram
Mutsara wakakosha: 'Ndiri'
Birthstone: Aquamarine (Kurume); Dhaimani (Kubvumbi)
Nhamba Vibration: Kuverenga nhamba 9
Ruva: Honeysuckle & Inotapira Pea
Chinese Zodiac Twin: Dhiragoni
Anonakidza Chinese Zodiac Twin: Dhiragoni
Tarot Kadhi Sangano: Changamire (Aries) & Iyo Shongwe (Kurume)
Kuporesa Makristasi: Amethyst , Ropa rebwe , Carnelian , Coral , Malachite , Rose Quartz
Akakurumbira Aries: Erica Jong, Elton John, Victoria Beckham, Lady Gaga, Vincent Van Gogh, Thomas Jefferson
Aries kuenderana, Murudo & Mumubhedha
Muhukama Ram inogona kunge iri mudiwa, isingatyi kuyedza zvinhu zvitsva. Shamwari dzakanakisa dzeAries ndidzo Leo uye Sagittarius kuteverwa kechipiri na Gemini uye Aquarius .
Unoda kuziva zvakawanda? Verenga zvizere Aries inoenderana chimiro .
Izwi rekuti nap haripo mumazwi aRamu. Iwe uchave nerombo rakanaka kuvapinza mumubhedha usiku. Pane zvakawanda zvekuona nekuita, uye mwana wako weAries anozvida ZVESE. Kune kufarira kunotapukira pamusoro pevana ava kunokwezva vamwe.
Hazvina mhosva kuwanda kweshamwari, zvisinei, wako Ram anoda kubuda pamusoro pepake. Kana vasingakwanise kana shamwari dzavo dzisingakwanise kuenderana, vanokurumidza kugumbuka vorega, voenda pane chimwe chinhu.
Zvisinei nezera ravo, uchaona Ram wako asingatyi kutaura zvavanofunga. Ivo vanogona kusabatirira pane iyo nyaya iyo yakamisa maitiro akasimba akadaro, asi hapana anozoikanganwa. Ndiyo moto neMars element mumwana wako. Iye kana iye haana kuitirwa chinzvimbo chezvematongerwo enyika chero nguva munguva pfupi.
RUDZIDZO: Vana veAries vanobatsirwa zvakanyanya kubva mupfupi 'nguva kunze' pane kusangana kwevabereki.
Unoda kuziva zvakawanda? Verenga zvizere Aries Mwana nyeredzi nhoroondo .
Musikana weAries anogona kuve akaomarara ekirasi, anogara akagadzirira nemhinduro yekuzvimirira kune chero mamiriro ezvinhu.
Haazotyi bvunzo kana hushingi, uye anonyatso kubudirira pakuzviratidza. Vazhinji vanova vanomira-vakomana mune zvavo zveshambadziro. Mushure mezvose, kuvimba izita rake repakati, rakabatanidzwa neakasimba akasimba akasununguka streak.
Musikana weAries haazofarire vanhu vane hushe, uye anomutsika zvitsitsinho nekuchera kana achinge asangana nenzira yakadaro. Vabereki vanogona kunetsekana nekuchengeta chiremera chavo pahwaro hwakasimba.
Unoda kuziva zvakawanda? Verenga zvizere Aries Musikana hunhu chimiro .
Mukomana weAries anosangana nenyika padanho ravanoratidzika kunge vanoziva zvakasikwa asi vanogona kuvhiringa vamwe. Achagara achienda kunotevera kutsvaga kukuru, izvo zvakare zvinoita kuti vashamisike kwazvo (kunyangwe iri tad inoshungurudza amai nababa).
Uyu Mwanakomana Chiratidzo (iwe uchasvika pakutiziva isu, isu tinoda puns) haizombofa yakafungidzirwa kana kukwana mubhokisi retsumo. Izvi zvinovaita vanokwanisa kuchinjika uye vanokwanisa kukurira akawanda ematambudziko anozosiya vamwe vana mukukomba kwemisodzi. Dambudziko revabereki nderekuenzanisa kuvimba kwakasimba nedosi ine hutano yechokwadi.
Unoda kuziva zvakawanda? Verenga zvizere Aries Mukomana hunhu chimiro .
ipuraneti ine gore rakapfupika
Aries Basa, Pets & Nguva
Kutsvaga basa hakuna kunetsa kunaRamu. Hunhu hwavo hwebasa hunoita kuti zvive nyore kuvhura mikova kunyangwe hupfumi husiri kuita yekutamba kunofadza. Iyo Ramu inoshandisa kuvimba kwechokwadi muhunyanzvi hwavo kuhwina vangangove vashandirwi pamusoro.
Makondohwe anoita zvakanaka kwazvo mukutengesa - unogona kutengesa jecha murenje! Zvemitambo mabasa zvinokutongera sezvinoita zvakaoma uye nekukurumidza bhizinesi vhiri uye kubata.
MaAries anoda mhuka inoteedzana nehupenyu hwavo hwakanyanya, saka imbwa ine simba inogona kunge yakanaka.
Sezvineiwo zvakakwana, zvisinei, mamwe maRamu anosarudza chisikwa chidiki icho chiri chepasi kuchengetedza saka havafanirwe kunetseka nezvazvo.
Chero chinhu chinokwikwidza uye icho chinopisa simba chinokumbira kuna Ramu. Ivo vanogona kutora chikamu munhoroondo reenactment yekuita iyo 'Mars' element, semuenzaniso.
Mazhinji maAries anodawo mashandiro ekunze sekumhanya, rollerblading, nezvimwe.
Dzivisa kushanda mukutenga kweRam. Ivo vanoda chimwe chinhu chinonakidza uye chinokurudzira, kunyanya nyowani kana kutema zvigadzirwa zvekucheka!
Batsira maAries ako kuenda kumberi kwemutambo mune tekinoroji kana kuvapa imwe glitzy trinket iyo yavanogona kuratidza.
Neimwe nzira chero chinhu chinosangana nechikafu chinoenda kure nzira yekuita kuti Ram rinyemwerere.
Camellia Zvinoreva & Symbolism
Gemini uye Gemini kuenderana: Hushamwari, Rudo & Bonde
Aquarius neRibra kuenderana: Hushamwari, Bonde & Rudo
DREAM DICTIONARY Giraffe - Gypsy Zviratidzo Zviratidzo & Zvinorehwa
000 Ngirozi Nhamba: Zvazvinoreva mune zveMweya, Rudo, Numerology, & Kukosha kweBhaibheri
libra murume uye gemini mukadzi hukama
libra murume uye aquarius mukadzi pamubhedha
zuva rezuva remekiyuri rakareba kupfuura gore raro rezuva.
nzira yehupenyu 7 uye 7 kuenderana